Raad Raac News Online – Mareykanka iyo Itoobiya oo ku Heshiiyey la Dagaalanka……..
Mareykanka iyo Itoobiya oo ku Heshiiyey la Dagaalanka……..
Wasaarada arimaha dibada dalka Mareykanka qeybta la dagaalanka Argagixisada ayaa shaacisay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku taageeraan Xukuumada itoobiya si ay u suurta gasho in itoobiya ay laba jibaarto la dagaalanka Al-shabaabka Soomaaliya ka jira.
Xukuumada Washiton oo Saldhigyadeeda la dagaalanka waxa looga yeero argagixisada ku balaarisay qeybo ka mid ah wadamada Qaarada Africa, ayaa haatan muujineysa sida ay ugu heelan tahay la dagaalan Al-shabaab iyo Kuwa kale ee ka jira galbeedka Africa.
War qoraal ah oo ka soo baxay Mareynkanka gaar ahaan Waaxda arimaha dibada qeybta la dagaalanka Waxa loogu yeero Argagixisada islamarkaana lagu daabacay Wargeyska Washitong Post, ayaa Mareykanka wuxuu si weyn ugu amaanay dowlada itoobiya sida dagaalada ay ugala jirto Al-shabaab iyo qaabka ay u socdaan.
Xukuumada Washiton ayaa daaha ka rogtay in ciidamada itoobiya dhiig kaga daatay la dagaalanka Al-shabaab islmarkaana itoobiya wiilal kaga maqan yihiin Soomaaliya, taasi oo muujineysa taageerada aan kala harka lahayn ee itoobiya Soomaaliya u muujisay.
“Ethiopia waa saaxiib taageeray Soomaaliya oo naf iyo maalba ku garab istaagay, Mareynkanka wuxuu diyaar u yahay inuu dhiira geliyo mar kale itoobiya si ay u sii wado caawinta Soomaaliya,” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Ugu danbeyn warka qoraalka ee Mareynkanka ka soo baxay ayaa loogu baaqay itoobiya in meesha ay ka sii wado doorkeeda ku aadan Nabad ku soo celinta iyo gacan siinta xukuumada Soomaaliya.